Nuxurka Kulan Ra’iisal-wasaaraha Itoobiya ku Qaabilay Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE | Maalmahanews
War-saxaafadeed — October 10th, 2017
Ra’iisal-wasaaraha dalka Itoobiya Mudane, Hailemariam Desalegn, ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Guddoomiyaha, ahna Murrashaxa Jagada Madaxweynaha xisbul-xaakimka Jamhuuriyadda Somaliland ee KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi iyo wefti uu hoggaaminayo oo socdaal ku tagay magaalada Addis Ababa ee waddankaasi.
 Kor u sii qaadida iyo xoojinta xidhiidhka labada dal ee Somaliland iyo Itoobiya.
 In labada dal yeeshaan iskaashi dhaqaale oo ka sii wayn ka hadda u dhexeeya.
 Isticmaalka dekedaha oo la isla gartay in dalka Itoobiya si wayn u isticmaalo dekedda Berbera oo hadda lagu wado maalgalin lagu horumarinayo oo baaxad leh.
 Masuuliyiinta labada dhinac waxay isku raaceen in la xoojiyo iskaashiga bulshooyinka ku dhaqan Gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan in laga wadashaqeeyo ka midho-dhalinta suuqa xorta ah ee istugga waddamada Geeska Afrika iyo sidii Somaliland uga mid noqon lahayn.
 Waxa kaloo ay ka wadahadleen sidii labada dal uga sii wadashaqayn lahaayeen adkaynta nabadda iyo xogta ammaanka ee mandaqada.